သမ္မတဦးသိန်းစိန်သမီးနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်လိုခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ဖိုးထက် - မုန်းတာဟာ ရှက်စရာ
● ၀န်ထမ်းပြေးတစ်ဦးရဲ့ဘ၀ နေ့ရက်၊ ၆ ဇန်-၂၀၁၂၊ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်
မြန်မာပြည်မရောက်တာကြာပကော။ ၁၉၉၀ ကနေ ၂၀၀၃အထိ မကြာခဏ၊ အလည်ပြန်နေကျ၊ ၂၀၀၃မှာ ၀န်ကြီးဌာနက ၀န်ထမ်းပြေးအချို့၊ ပြည်ပထွက်ခွာခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်း (လူဦးရေသောင်းဂဏန်းခန့်) ကြောင့်၊ ပြန်မိသူတွေလည်း ပတ်စပို့အသိမ်းခံရ၊ အဆမတန်ပေးကမ်းပြီးမှ ပြည်ပပြန်ထွက်ရ၊ အချို့ဆို အောက်လမ်းကနေ ပြည်ပပြန်ထွက်ရနဲ့ မြန်မာပြည်မပြန်ရဲတာကြောင့် ၁၀နှစ်ကြာသွားပါတယ်။ အခုတော့ အစိုးရသစ်တက်လာပြီလေ။ ဒီမိုကရေစီတဲ့၊ ၀န်ထမ်းပြေး သတ်မှတ်ခံရသူ ဥပမာ ကျွန်တော်ဆိုရင် တစ်နှစ် ကန်ဒေါ်လာ၁၅၀၀ (S$150 per month) နဲ့ နိုင်ငံတော်ကို မှန်မှန်အခွန်ဆောင်ရင်း တနေ့မြန်မာပြည် ပြန်လည်အခြေချမယ် စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့လူကိုး။ အေးဗျာ… အင်္ဂလန်နေသူတွေက အခွန်ဆောင်စရာမလို၊ ဂျပန်၊ အမေရိကန်၊သြစတြေလျှား နေသူမြန်မာများလည်း အခွန်မဆောင်ကြ၊ ဘာကြောင့် စင်ကာပူနေတဲ့ ကျုပ်က အခွန်ဆောင်နေရသလဲ ..မေးရင်၊ ကိုယ့်ပေါင်ကိုလှန်ထောင်းသလို ဖြစ်မှာပဲ၊ တတ်နိုင်သရွေ့ အပြစ်နည်းအောင်နေရတဲ့ လူ့ဘ၀ပါဗျာ။ သူများတွေ အခွန်မဆောင်ပဲ အောက်လမ်းနဲ့ ပတ်စပို့အသစ်ပြန်လဲနေသူတွေလို မလုပ်ချင်တော့ ၂နှစ်ပဲသက်တမ်းရှိတဲ့ ပတ်စပို့ကို သက်တမ်းတိုးဖို့ လိုတာကိုးဗျာ၊
ဒါနဲ့ ၀န်ထမ်းပြေးဖြစ်သူ မြန်မာပြည် အရဲစွန် ပြန်လည်ပတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ချို့က အိုကေတယ်၊ ပြသနာမဖြစ်ပဲ ပြည်ပကို ပြန်ထွက်လာနိုင်တာတွေ့တော့ ကျုပ်လည်း မိသားစုနဲ့ ၁၀နှစ်ကြာမရောက်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ အ၀င်မှာတော့ အိုကေတယ်ဗျို့။ တစ်ချို့လည်း ဒေါ်လာ၁၀ ပတ်စပို့ကြား၊ ညှပ်ပေးရင် ပိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ .. ဒါမျိုး လပ်စားချင်လာအောင် အားပေးအလုပ်မလုပ်ချင်ပါဘူး။ လ.၀.က အ၀င်ကောင်တာမှာ အခွန်ဆောင်ပြီးသား စလစ် (ငွေရပြေစာဖြတ်ပိုင်း နဲ့ ဇနီးသည်အတွက် အလုပ်မလုပ်ကြောင်း သံရုံးထောက်ခံစာ) တွေတောင် မတောင်းတော့ဘူး။ သြော်.. အစိုးရသစ်၊ မူဝါဒသစ်… ဒါမှ ဒို့မြန်မာပြည်အစိုးရသစ် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကွ ..လို့ စိတ်ထဲက ကြွေးကြော်မိပါတယ်။ တကယ်ပါ။
ပျော်တာပေါ့ဗျာ။ ၁၀နှစ်ကြာ မရောက်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်မွေးရပ်မြေ၊ မိဘ၊ သူငယ်ချင်းများနဲ့ တွေ့ဆုံ၊ ပျော်ရွင်၊ ၀မ်းမြောက်မှုတွေ ၂ပတ်ကြာခံစားပြီးတဲ့နောက်တော့ ပြည်ပသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ အချိန်ရောက်လာပါတယ်။ မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေများ ၆ယောက်အုပ်စုဆိုတော့ ကျုပ်မိတ်ဆွေက စ.သုံးလုံးဝန်ထမ်းတစ်ဦးနဲ့ လ.၀.က ၀န်ထမ်းတစ်ဦးပါ ပိုပြီးအဆင်ပြေအောင် ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ မလိုပါဘူး ပြောလည်းမရ၊ လိုအပ်ရင် လုပ်ကိုင်ပေးဖို့ အချွေအရံတွေပေါ့။ လိုလေသေးမရှိ။ လေဆိပ်မှာလည်း အိတ်တွေ အတင်းမသယ်ပေးတဲ့ လူငယ်အားကောင်းမောင်းသန် ရည်ရည်မွန်မွန်လေးတွေ အများကြီးပဲ၊ ငွေမပေးလဲရတယ်ဆိုပေမဲ့ ကျပ်၅၀၀ဆီ ကျုပ်သူငယ်ချင်း ကိုဝေသံတရာ အဖြစ်နဲ့ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပေးကမ်းခြင်းသည် အောင်မြင်သည် …ဆိုပဲ ..မြန်မာပြည်မှာလေ။ ကျပ်၅၀၀ ဆိုတော့ ဒေါ်လာဝက်တောင်မရှိပေမဲ့ ..သယ်ပေးတဲ့လူငယ်လေးများအတွက် မနည်းပါဘူး။
● ကျွန်ုပ်၏ လ.၀.က နဲ့ အခက်အခဲ စတင်ခြင်း
ကျုပ်ဇနီးနဲ့ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေများကတော့ Immigration Counter ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး ကျုပ်ကို စောင့်နေကြပါပြီး ကျုပ်အလှည့် ကောင်တာထိပ်မှာ ရပ်ပြီး ပတ်စပို့ပေးလိုက်တယ်။ အသက်၂၅နှစ်အရွယ် ၀န်ထမ်းအမျိုးသမီးလေးက အန်ကယ်၊ ကင်မရာကို ကြည့်ပေးပါ ဆိုလို့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံတယ်။ ၃မိနစ်လောက် စစ်ဆေးပြီး၊ အမျိုးသမီးက ကျုပ်ကို ဘာမှမပြောပဲ၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရပ်နေတဲ့ လ.၀.က အမျိုးသားငယ် တစ်ဦးကို လှမ်းအော်ခေါ်လိုက်တယ်။ ပြသနာတော့ စပြီလို့ စိတ်ထဲမှာ ရှိပေမဲ့၊ အဆင်မပြေလဲ အလွန်ဆုံးဖြစ်လှ နောက်နေ့လေယာဉ်နဲ့ လိုက်မယ် ဆုံးဖြတ်ထားတော့ အေးအေးဆေးဆေး၊ စိတ်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ လ.၀.က အမျိုးသားငယ်ရဲ့ မေးခွန်းကို အမှန်အတိုင်းဖြေလိုက်တယ်။
ဦးဝတ်မှုန်၊ အဖေနာမည်ပြောပါခင်ဗျာ … ဦးလှမောင် ပါ..။
အစိုးရ၀န်ထမ်း ဘယ်မှာလုပ်ဖူးပါသလဲ .. စက်မှု(၁) မှာပါ..။
အန်ကယ်.. ခဏလောက် တာဝန်ခံဆီ လိုက်ခဲ့ပေးပါဦး။ ခဏလေးပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် .. ပြောပြီး ကောင်တာကနေ တာဝန်ခံ အခန်းကို လိုက်သွားရတယ်။ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဇနီးသည်ကို သွားနှင့်ဖို့ လက်နဲ့အချက်ပြပြီး လ.၀.က တာဝန်ခံရုံးကို ရောက်သွားတယ်။ စ.သုံးလုံး ၀န်ထမ်းကတော့ လ.၀.က တာဝန်ခံရုံးထိ လိုက်လာတယ်။ လ.၀.က ၀န်ထမ်းလေးကတော့ လိုက်မလာတော့ဘူး။ အခြေအနေက သူမတတ်နိုင်ဘူးသိတော့ ချန်နေရစ်ပြီလေ..။ ကျွန်တော်ရဲ့ ၀န်ထမ်းပြေးပြသနာဆိုတာ သေချာပေါက်သိပေမဲ့ ကျွန်တော့ဘက်တော်သား စသုံးလုံးဝန်ထမ်းကတော့ ဘုမသိ၊ ဘမသိနဲ့ လ.၀.က တာဝန်ခံရုံးအထိ လိုက်လာတယ်။ သူတို့ကို ဒီပြသနာရှိတယ်လို့ ကျုပ်က ကြိုတင်ပြောမထားပဲကိုး။
လ.၀.က တာဝန်ခံရုံးမှာ နာရီဝက်လောက် အစစ်ဆေးခံပြီး၊ ခင်ဗျားတို့ ၀န်ကြီးဌာနက ကင်းရှင်းစာရွက်ပါမှ ကျွန်တော်တို့ လ.၀.က အနေနဲ့ ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပေးနိုင်ပါမယ်။ အေးဗျာ.. အနှစ်၂၀ကျော်တုန်းက ကိစ္စဆိုတာ သိပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေ ဒီလို ထွက်ပြေးပြီး ပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ရတာလည်း အပြစ်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ၊ ခင်ဗျားတို့ ၀န်ကြီးဌာနက စာထုတ်ထားတော့ BL စာရင်းထဲဝင်နေပြီ၊ ဘီအယ်လ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း လွှတ်ပေးဖို့မလွယ်ဖူးဗျာ။ ညွန်ကြားချက်အတိုင်း လုပ်ရတာပါဗျာ။ လွယ်လွယ်လေးပါ.. အခုလေယဉ်နဲ့တော့ လိုက်လို့မရတော့ဘူ။ ခင်ဗျား ၀န်ကြီးဌာနကို သွားပြီး ကင်းရှင်းကြောင်း (ငွေ၅၀၀၀ ဘွဲ့ရော်ကြေးငွေပေးပြီးကြောင်း) စာလေးသွာိးယူလိုက်ပါ။ တရက်ထဲနဲ့ ပြီးပါတယ်။ မနက်ဖန်လေယဉ်နဲ့ပဲ လိုက်ပေါ့..လို့ပြောတယ်။ ဟာ… သူ့အတွက်တော့ သိပ်လွယ်တာပေါ့။ ဒီလူ အကြံဖန်လုပ်နေပြီ ဆိုတာ သိလိုက်ပြီ။ တစ်ပြားမှ မပေးဘူး.. ဆုံးဖြတ်ထားပြီး .. နောက်ဆုံး ခင်ဗျားတို့သဘောပဲ ကျုပ်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ..မေးတော့လည်း လ.၀.က ကိုအောင်ဆိုသူက ဘာမှမပြောပဲ၊ နောက်လာတဲ့ လူတွေရဲ့ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနေတယ်။ တကယ်လဲ ကိုအောင် အလုပ်ရှုပ်လှပါတယ်။ ကျုပ်ကတော့ ထိုင်လျှက်ပါပဲ။ ကျုပ်ဖက်တော်သား စသုံးလုံး ၀န်ထမ်းမိတ်ဆွေကတော့ ကိုအောင်ရေ၊ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါ..ခင်ဗျားတို့ကလည်း ဗျာ… ဘာညာနဲ့ ဘေးက ၀င်ပြောတော့ လ.၀.က ကိုအောင်က ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို လှည့်ပြီး မနက်၇နာရီအချိန်ဆိုတော့ ..ဟဲလို. ဗိုလ်ကြီးလား။ နိုးပြီလားဗိုလ်ကြီး… ၀န်ကြီးဌာနကိစ္စ တစ်ယောက်အခက်အခဲရှိလို့ပါ ..အတိုချုံးရှင်းပြတယ်။ လွှတ်ပေးလိုက်ရမလားဗိုလ်ကြီး ..မေးရင်း… ဟုတ်ကဲ့ပါဗိုလ်ကြီး..ပြောပြီးဖုန်းချလိုက်တယ်။ ကျုပ်တို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီး ဗိုလ်ကြီးကပြောတယ် .. ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ…ကျွန်တော်တို့လဲ ၀န်ကြီးဌာနညွန်ကြားချက်အတိုင်း လုပ်ရတာပါ ..လို့.. စိတ်ပျက်သံနဲ့ ပြောပါတယ်။
● ဟိုလှည့် သည်လှည့်၊ လက်ဆောင်တောင်းခံနည်း
နောက်ဆုံးတော့ စသုံးလုံးမိတ်ဆွေလည်း လ.၀.က တာဝန်ခံရုံးကို ၀င်ချည်ထွက်ချည် ၂ခါလောက်လုပ်ချိန်၊ စင်ကာပူနိုင်ငံထွက်ခွာမဲ့ လေယဉ်က ၀န်ထမ်း၂ဦး လ.၀.က တာဝန်ခံရုံးအထိ ရောက်လာပြီး၊ ခရီးသည်တစ်ဦးကျန်နေပါတယ်။ လေယဉ်တံခါးပိတ်တော့မှာမို့ လိုက်ဖြစ်၊မဖြစ် လာမေးတယ်။ ကျုပ်ရဲ့ အိတ်တွေ စင်ကာပူပါသွားတော့မယ်၊ ပြန်ရွေးထုတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ စင်ကာပူကိုပါသွားမယ် ..နောက်မှ ပြန်လာပေးပါမယ်၊ ဖြစ်မလားလို့ လေယဉ်ဝန်ထမ်းကမေးတော့ ကျုပ်က ကိစ္စမရှိဘူး၊အိတ်တွေ စင်ကာပူသယ်သွားလဲကိစ္စမရှိဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ကြိုက်သလိုလုပ်တော့ဗျာ။ ကျုပ် ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ ဘုရားသခင်အလိုတော်ပဲ ..လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ လ.၀.က တာဝန်ခံ ကိုအောင်က သူ့အရာရှိဗိုလ်ကြီးဆိုသူထံ ဒုတိယအကြိမ်ဖုန်းဆက်ပြီ၊ ဒီလူက တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးဗျ၊ မိသားစုပါတယ်။ သူ့အိတ်ကို ပြန်ထုတ်ရင် လေယဉ် Delay ဖြစ်တော့မယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗိုလ်ကြီး..မေးပြီး ဖုန်ချလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ လေယဉ်ဝန်ထမ်း၂ယောက်နဲ့ ကျုပ်မိတ်ဆွေ စသုံးလုံးဝန်ထမ်းရှေ့မှာ ခင်ဗျားကိုထောက်ထားညှာတာမှုနဲ့ ဒီတစ်ခေါက်ခွင့်ပေး လိုက်မယ်။ ၀န်ကြီးဌာနက ကင်းရှင်းကြောင်းစာယူလာပေးပါမယ် ..ဆိုတဲ့ ကတိခံဝန်ချက်ကို လက်မှတ်ထိုးပါ။ ဆိုပြီး စာအုပ်တစ်အုပ် ထုတ်လိုက်ပြီး အထဲကစာရွက်ဗလာကြီးကို လက်မှတ်အမြန်ထိုးခိုင်းနေတယ်။ ကျုပ်က စာအုပ်လှန်လှောကြည့်တော့ ဗကပကိစ္စ၊ လက်နက်ကိုင်ကိစ္စ၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု၊ NCGBU, ABSDF နိုင်ငံရေးအမှု..တွေကို လွှတ်ပေးထားတဲ့ ခံဝန်ချက်စာတွေ ဖြစ်နေတယ်။ လ.၀.က တာဝန်ခံ ကိုအောင်က အချိန်မရှိရတဲ့အထဲ ခင်ဗျားကလဲဗျာ ..ပြောရင် ၀န်ကြီးဌာနက ကင်းရှင်းကြောင်း စာယူလာပေးပါမယ် …လို့ အမြန်ရေးလိုက်ပြီး၊ ကဲ ..လက်မှတ်ထိုးဗျာ…ပြောလို့ ထိုးလိုက်တယ်။ ထိုးပြီးတာတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ ကြောပိုးအိတ်၊ လက်ပတော့အိတ်၂ခုကို လေယဉ်ဝန်ထမ်း၂ဦး ဆွဲပြီး၊ အန်ကယ်၊ လေယဉ်ထွက်တော့မယ်။ မြန်မြန်..မြန်မြန် ..ပြောပြီး .. ပြေးပါလေရော၊ အသက်၅၀အရွယ် ကျုပ်လည်း ပုံပျက်ပန်းပျက်၊ လေယဉ်ဝန်ထမ်း မိန်းကလေးနဲ့ယောင်္ကျားလေး၂ယောက်နောက် ပြေးလိုက်ရတာပေါ့။ ဂိတ်အဆင့်ဆင့်ကလည်း အမြန်လုပ်ပေးတော့ ၂မိနစ်အတွင်း လေယဉ်ဆီရောက်တယ်။ တံခါးပိတ်၊ ဂျိတ်၊ လေယဉ်လဲထွက်တော့တာပါပဲ။
စင်ကာပူလေဆိပ်ရောက်မှ ကျန်ခဲတဲ့မိတ်ဆွေကို တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီ၊ ရောက်ပြီ၊ အဆင်ပြေသွားပါတယ် ..ပြောရတယ်။ ပြေမှပေါ့ကွ…ငါက ယူအက်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ပေးလိုက်တာကိုး…လို့ပြောတော့ ကျုပ်လည်း လဒငိုင် ဖြစ်သွားတယ်။ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် လပ်မပေးချင်လို့ တောင့်ခံထားတာ ..အခုတော့ ကျုပ်လည်း ဒီပုပ်ထဲက ပဲဖြစ်သွားတာကိုး….။ (မြန်မာ့ဝန်ထမ်းများလစာနှင့်မလောက်ပြောပြီး အာဏာရှိသူများက သူတို့အိပ်ထဲရသရွေ့ထည့်နေဆဲပါ)။
● လ.၀.ကနှင့်အခက်အခဲ ဒုတိယအကြိမ်၊ နေ့ရက်၊ ၁၇ ဇန်-၂၀၁၃၊ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်
မြန်မာပြည်က မိတ်ဆွေက မင်းအတွက် ၀န်ကြီးဌာနက ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံစာ ငါယူပေးမယ်၊ ကျပ်၅ထောင် ရော်ကြေးငွေပေးပြီး ကြောင်း ချလံ၊ ငွေရပြေစာ ပို့ပေးပါ ..ပြောပေမဲ့၊ ပေါ့ပေါ့ပဲနေလိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်လာမှ ဒီကိစ္စ မကြေပွဲနွဲလိုက်ဦးမယ် စိတ်ကူးထားတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ပြန်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ပြည်တွင်းအ၀င်ကတော့ အိုကေပါတယ်။ မိဘ၊မိတ်ဆွေများနဲ့တွေ့ပြီး မြန်မာပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အံ့မခန်းဖြစ်နေတာတွေ မြင်ရတယ်။ လစဉ် ပြည်ပအလုပ်လုပ်သူများ အခွန်ပေးစရာမလိုတော့ကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရကကြေညာလိုက်တော့ ၁-ဇန်-၂၀၁၂ ကစပြီး သံရုံးအခွန် အနှစ်၂၁နှစ် ပေးရတာ တစခန်းသိမ်းသွားတယ်။ အခွန်နှုန်းကို ၂၀၀၈ကစပြီး ကန်ဒေါ်လာ၁၀၀ပဲပေးရပေမဲ့ တစ်နှစ် ဒေါ်လာ၁၀၀၀ ဆိုတော့ ပေါက်ဈေးအရ ကျပ်၁၂သိန်း ဖြစ်နေတယ်။ ကျပ်၁၂သိန်းဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှ ပိုမိုလှုဒါန်း၊ ပေးကမ်းနိုင်မှာဖြစ်လို့ ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ စကားမစပ်ရေးရရင် စင်ကာပူရောက်တဲ့ ၁၉၉၀ ကနေ ၂၀၁၂ အထိ ၂၁နှစ်လုံး တစ်လ ကန်ဒေါ်လာ ၁၂၀နှုံးနဲ့ အသက်အာမခံစုဆောင်းထားရင် အတိုး၊အရင်းငွေ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာတစ်သိန်းလောက် နိုင်ငံတောက်ကို လှုဒါန်း၊ အခွံဆောာင်ခဲ့ပြီးတဲ့ တာဝန်ကြေ နိုင်ငံသားကောင်းပေါ့ဗျာ။ ကားပါမစ်လျှောက်ပါလား..ပြောလာသူများကိုလည်း … ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက် မလုပ်လိုဘူး ပြောပြီး ..မလျှောက်ခဲ့ပါဘူး။ အေးအေးနေခွင့်ရတာပဲ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးအထူးတင်မိ။
● သမ္မတရုံးအင်တာနက်ဝက်ဆိုက် Black List စာရင်းများ
ထုံးစံအတိုင်း လေဆိပ်ကွန်ပြူတာမှာ ဘီအယ်လ် Black List သွင်းခံထားရတဲ့ စက်မှု(၁)က ကျွန်တော့မိတ်ဆွေများ ….စာရင်းကိုကြည့်မိတယ်။ ညွန်ကြားရေးမှုးအဆင့်အထိ လူပေါင်း ၄၀၀လောက် ရှိတယ်။ သြော် ..ဒါလောက်များတဲ့လူတွေ၊ ၀န်ကြီးဌာန၃၀စလုံးကို ပေါင်းလိုက်ရင် သောင်းနဲ့ချီ စာရင်းရှိမှာပဲ၊ ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ ပိုင်လို့ စာရင်းဖျောက်နိုင်သူများလည်း ရှိတာပေါ။ သမ္မတရုံးအင်တာနက်ဝက်ဆိုက်မှာ ဗကပကိစ္စ၊ လက်နက်ကိုင်ကိစ္စ၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု၊ NCGBU, ABSDF နိုင်ငံရေးအမှု.တွေနဲ့ Black List စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးသူများ ထောင်ပေါင်းများစွာမှာ ကိုယ့်နာမည်များ ပါနေမလား .. ကြည့်တော့ ဘယ်ပါမလဲဗျာ…. ။ ကျုပ်အမှုက ၀န်ထမ်းပြေးဆိုတော့ အရမ်းအပြစ်ကြီးနေသလားမသိ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်ဆိုတော့ တိုင်းပြည်ကထွက်ပြီး ပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်၊ အခွန်လစဉ်ဆောင်ပေးတာလဲ ၀န်ကြီးဌာနတွေက အခဲမကြေနိုင်သေးသလားမသိပါ။
● ကျွန်ုပ်၏ လေဆိပ် လ.၀.က ပြသနာဖြေရှင်းနည်း
လေဆိပ်ကွန်ပြူတာမှာ Black List ရှိသေးသလား သေချာအောင် ကြည့်ပေးဖို့လည်း ဘယ်သူမှ လုပ်မပေး၊ ညွန်ကြားရေးမှုး (ဗိုလ်မှုး ဦးဆွေနဲ့ သိတယ်ဆိုသူလည်း လှမ်းမေးတော့ ဘာမှမထူး၊ ညွန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဗိုလ်မှုးကြီး ကိုကိုနဲ့ ဗိုလ်သင်တန်းမှာ ကုတင်ချင်းကပ်အိပ်ဖူးသူ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းကို အကူညီတောင်းတော့လည်း ထုံဏှိဘာဝေ၊ ၀န်ကြီးဦးစိန်ရရဲ့ တူတော်စပ်သူကလည်း …ကြုံရင်မေးပေးပါမယ် ..ပြောတယ်။ မြန်မာပြည်အလည်ပြန်လာတဲ့ ၄ပတ်ခရီးစဉ်မှာ လေဆိပ် Black List ၀န်ထမ်းပြေး သောင်းနဲ့ချီတဲ့စာရင်းဝင် လူဆိုးကြီးများကို ခွင့်လွှတ်ပါရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရဆီ တင်ပြပေးမဲ့လူ လိုနေပါတယ်။ နောက်ဆုံး သမ္မတကြီးရဲ့ သမီးနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ရင်တောင် .. ရှင်တို့ ..ဆေးရိုးသယ်ကိစ္စ ဒယ်ဒီလဲစိတ်မ၀င်စားဖူ၊ ကျမလည်း စိတ်မပါဘူး။ အောက်လမ်းနဲ့ပဲ ရှင်းလိုက်ကြပါနော်…လို့ အပြောခံရမှာ မြင်ယောင်သေးတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ လေဆိပ် လ.၀.က ပြည်ပထွက်ခွာရုံးကို ကိုယ်တိုင်သွားပြီး အောက်ပါ စာလေးကို လိုက်ပြတယ်။ လေဆိပ် တာဝန်ခံများနဲ့ ဗမာပီပီ အော်ဟစ် အခြေတင်ပြောရတဲ့အထိ ဖြစ်လာတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ၀န်ကြီးဌာနတွေက ညွန်ကြားထားလို့ ကျွန်တော်တို့ လ.၀.က ကလုပ်ရတာ၊ လုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ကြားထဲက လူလူချင်းထောက်ထား၊ စာနာမှုနဲ့ ကျွန်တော်တို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲက လက်မှတ်ထိုး၊ ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပေးရတာလည်း ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ကြီးတယ်။ ဘာညာပေါ့ဗျာ…။
ရန်ကုန် Date: 6th Feb 2013
အကြောင်းအရာ။ ။ ၂၀၁၂တွင် ၀န်ထမ်းပြေးအဖြစ် ပြည်ပထွက်ခွာခွင့် ပိတ်ပင်ထားခံရခြင်းကိစ္စ
ကျွန်တော်သည် မြန်မာ့စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ စက်မှု(၁) ၀န်ကြီးဌာနတွင် အလုပ်ရုံခွဲမှုးအဖြစ် ၄နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၀တွင် ပြည်ပမှ အင်ဂျင်နီယာအလုပ်အကိုင်ရရှိသဖြင့် အလုပ်ထွက်စာတင်ခဲ့ရာ ထွက်ခွင့်မရသဖြင့် လစာမဲ့ခွင့်တင်ကာ ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၂တွင် ၀န်ကြီးဌာနမှ အလုပ်ထုတ်ပယ်စာ ရရှိပါသည်။ ထိုစာတွင် ဘွဲ့ရော်ကြေးငွေ ကျပ်၅၀၀၀ မသွင်းပါက အရေးယူမည်ဟူသော ပါရှိသဖြင့် ပြည်ပမထွက်ခင် ကတည်းက ကျပ်၅၀၀၀ နိုင်ငံတော်အစိုးထံသို့ပေးသွင်းခဲ့ပြီး ဘဏ်ချလံကို ၀န်ကြီးဌာနသို့ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
၁၉၉၂မှစပြီး မကြာခဏဆိုသလို မြန်မာပြည်သို့ မိဘဆွေမျိုးများထံ အလည်ပတ် လာရောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ၂၀၀၃တွင် ကျွန်တော်အပါအ၀င် ၀န်ထမ်းများစွာအား စက်မှု(၁) ၀န်ကြီးမှ ၀န်ထမ်းပြေးအဖြစ် ကြေငြာပြီး၊ ပြည်ပထွက်ခွာခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်မလာနိုင်ပဲ အစိုးရသစ် ၂၀၁၀ အစိုးရသစ် ပြောင်းလဲပြီးနောက်တွင် လာရောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
သို့သော် ပြည်ပထွက်ခွာ ကွန်ပြူတာစနစ်တွင် ကျွန်တော်တို့အား Black List အဖြစ် သတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်သည်ကို ၀မ်းနည်းစွာ လက်တွေ့ သိရှိရပါသည်။ ကျွန်တော်ပြည်ပသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာစဉ် လေဆိပ်တွင်မှအခက်အခဲမဖြစ်လိုပါ။ ထိုကိစ္စကို ပြည်ပမထွက်ခွာမှီ ရှင်းလင်းလိုပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ လူကြီးမင်းတို့၏ လ.၀.က ဌာနမှ လမ်းညွန်မှုလိုအပ်ပါသဖြင့်၊ မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ရှင်းလင်းပြောပြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
ဦးဇော်ဌေး (မှတ်ပုံတင် x x x x )
Peanut Media, Singapore
Tel: +65 x x x Email: xxx@gmail.com
နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီ လေဆိပ် လ.၀.က အရာရှိအုပ်စုကြီးထဲက တာဝန်ခံတစ်ဦးက ခင်ဗျားအတွက် ကျုပ်လုပ်ပေးပါမယ်။ စိတ်ချပါ၊ ပြသနာလုံးဝမဖြစ်စေရပါဘူး..ပြောပြီး ပြေလည်သွားပါတယ်။ နောက် တကယ် ပြည်ပထွက်ချိန်မှာ ပြသနာမဖြစ်ပဲ အေးဆေးစွာ ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ကိုယ့်ပြသနာ..ကိုယ်တိုင်ရှင်းမှရပါမယ်။ ဟိုး. န.အ.ဖ ခေတ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဘယ်..ကိုယ်တိုင်သွားရှင်းရဲပါ့မလဲဗျာ… ဆွဲစိ ခံလိုက်ရမှာပေါ့။
● ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှ ၀န်ထမ်းများ
လေဆိပ်က ၀န်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေကို အေးရှားဝါးက အရှုံးခံလုပ်ပေးနေတယ်။ လေဆိပ် မြို့ပြ၊ စက်မှု၊ လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာတွေတောင် အိတ်သယ်ပေးတာ၊ ဒီဖေါင် D.Form လုပ်ပေးတာ၊ Foreigner Overstay $3.00 per day penalty ဆောင်ပေးတာ စတဲ့ ဆားဗစ်လုပ်ငန်းတွေပဲ အောက်ဆိုက်လုပ်ရင်း ၀င်ငွေရှာရတယ်.တဲ့။ တကယ့် လုံခြုံရေး၊ ခရီးသွားများကို ကူညီရေး၊ လေဆိပ်နဲ့လေယာဉ်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကို အေးရှားဝါးကုမ္ပဏီကပဲ လုပ်နေတယ် သိရတယ်။ ဒါနဲ့ လေဆိပ် လ.၀.က ခရီးသယ်ကောင်တာက၊ အမျိုးသမီးငယ်လေးများကို ..Immigration ကိုလည်း ကန်ထရိုက်မပေးသေးဘူးလား..ရယ်စရာပြောတော့ ..မေခလာ နာမည်ရင်ထိုးနဲ့ အမျိုးသမီးက …ဒါဆိုရင် သိပ်ကောင်းတာပေါ့။ ကျွန်မတို့မှ လစာငွေ ကျပ်၈သောင်းနဲ့ အိုဗာတိုင်လဲမရ၊ နားရက်မရှိ လုပ်လိုက်ရတာ.. ဟေ့.. မစန္တာရေ ၊ ဟောဒီ အစ်ကိုကြီးက စင်ကာပူမှာဆို အင်မီဂရေးရှင်းကောင်တာ အလုပ်က ဒေါ်လာ၂ထောင်လောက် ရတယ်တဲ့။ ငါတို့များ ဒေါ်လာ၁၀၀ နဲ့ လုပ်လိုက်ရတာ …ပြောရှာပါတယ်။ အင်းလေ… သူတို့ခမြာ အောက်ဆိုက် (လက်ဆောင်) မရပဲ လုပ်ရရှာတယ်။ တာဝန်ခံများကတော့ ခြစားစနစ်ကနေ မျှစားစနစ်ကို အောင်မြင်စွာ ပြောင်းလဲနေကြပြီ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကတော့ လစာတစ်သိန်းအောက် ၀န်ထမ်းများမပါသေးပါ။ (မှတ်ချက်၊ အေရှားဝါးသည် အမေရိကန်တွင် သေဒဏ်ပေးခံထားရသော ၀ိသမလောဘသမား၊ ဘိန်းဘုရင်ဟောင်း ခွန်ဆာ ၏ ဆွေမျိုးများပိုင်ဖြစ်ပါသည်)။
ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်နည်းနဲ့လုပ်ရမလဲ ပြောပါခင်ဗျာ ..ဆိုတော့ လ.၀.က တာဝန်ခံက ၀န်ကြီးဌာန ကင်းရှင်းကြောင်းစာသွားယူတာ အကောင်းဆုံးပဲတဲ့။ အလိုလေး၊ နေပြည်တော်ထိ သွားရမှာဗျ၊ ပြီးတော့ အများကြီးပေးကမ်းရဦးမယ်။ ရက်ပိုင်းနဲ့ ပီးချင်မှပြီးမယ်။ ဒါက ၀န်ကြီးကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးရမလို ဘာလိုလိုပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့်ပဲ ကျုပ်မိတ်ဆွေ၊ ၀န်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီး၊ ညွန်ချုပ်၊ ညွန်မှုးများနဲ့ သူတို့စာရေးများ လစာ၂သိန်းအောက်ပဲရပြီး၊ လက်မှတ်တွေထိုးလိုက်ရတဲ့ ဗဟိုဦးစီးစနစ်က ရှိနေဆဲကိုး၊ ဟ..၀န်ကြီးဌာနတင် ဗဟိုဦးစီးစနစ် (လက်မှတ်ချည်းထိုးရတာ) ရှိတုန်းပဲလား ..မေးကြည့်တော့ ..ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေလည်း ဒီအတိုင်း ဗဟိုဦးစီးစနစ်ပဲ၊ လက်မှတ်ချည်းထိုးနေရတယ်…တဲ့။ .ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာ၊ မန်နေဂျာ လူကြီးတွေလည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရဌာန စစ်အမှုထမ်း၊ ရုံးမှုထမ်း ၀န်ထမ်းဟောင်းတွေပဲ ဆိုတော့ အိုမင်းဆွေးမြေ့နေတဲ့ စနစ်ဟောင်းကြီးကို အစိုးရသစ်၊ ကုမ္ပဏီအသစ်ချက်ချွတ်၊ နေပြည်တော်အသစ်ချက်ချွတ်မှာ စနစ်ဟောင်းကို ဖျောက်ဖို့တော့ ခဲယဉ်းနေဆဲပါ။ အီဘော်လူရှင်းနည်းနဲ့ပဲလုပ်နေရပါတယ်။ ရီဘော်လူးရှင်းမဟုတ်တာပဲ ကောင်းသလိုပဲ။ မြန်မာဓါတုအင်ဂျင်နီယာ RIT စီနီယာတစ်ဦးကတော့ နိုင်ငံခြားစံချိန်မီ စီးပွားရေးစနစ်ပြောင်းရင် အနည်းဆုံး ၅နှစ်အထက် ကြာမှာပဲလို့ ပြောတယ်။ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ RIT စီနီယာတစ်ဦးကတော့ ကွန်ပြူတာဖေါ်မက်လုပ်သလို Format လုပ်ပစ်လိုက်၊ လူဟောင်းတွေ ရှင်းပစ်လိုက်ပြီး၊ အသက်၃၀အရွယ် (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအရွယ်) လူသစ်တွေနဲ့ အစားထိုးပစ်လိုက်တာကောင်းတယ် ..ပြောပြန်တယ်။ အပြောကောင်းသူတွေ များပြီးလက်တွေ လုပ်နိုင်သူတွေ ရှားတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ စာရေးဆရာ ဆရာအောင်သင်း စာပေဟောပြောပွဲ စစ်ခွေး အယ်လဇေးရှင်းခွေးတွေအကြောင်း Black Pearl Engineering ကလာတဲ့ အီးမေးမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ စစ်ခွေးတွေ အလွန်တော်ကြောင်း၊ ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တတ်ကြောင်း၊ မြန်မာခွေးကို လေ့ကျင့်ပေးရင် ဖြစ်နိုင်မလားလို့ ဆရာအောင်သင်းက မေးတော့ စစ်ခွေးလေ့ကျင့်ရေးမှုး ဗိုလ်ချစ်မောင်က ဖြေတယ်…မြန်မာခွေးကိုသင်ပေးရင် တတ်တာပေါ့ဗျာ၊ မြန်မာခွေးက သင်ပေးရင် အကုန်တတ်လွယ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မပါရင် ခိုင်းတာမလုပ်တော့ဘူးဗျ။ စစ်မြေပြင်မှာ စိတ်ပါမှလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုး မရဘူး၊ မြန်မာခွေးကို မျိုးဆက် အနည်းဆုံး ၁၅ဆက်လောက် လေ့ကျင့်ပေးမှ အယ်လဇေးရှင်းစစ်ခွေး စရိုက်ကိုရမယ်..လို့ရေးထားတယ်။ အဲ.. ကျုပ်ကတော့ မှတ်ချက်ရေးရမယ်။..
မြန်မာခွေးကို သင်ကြားပေးဖို့ ဆရာအောင်သင်းအဆိုအရ မျိုးဆက်၁၅ဆက်လောက် (အနှစ်၁၅၀) လိုပေမဲ့ လူဖြစ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရင် ဥပမာ..သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ခေါင်းဆောင်သင်ကြားပေးရင် မျိုးဆက်တစ်ဆက်နဲ့ ဖြစ်နိုင်မှာပါ (အကောင်းမြင်ဝါဒ Positive Attitude ပေါ့ဗျာ)။ စင်ကာပူမှာတော့ ကျောင်းဆရာမတွေကို လစာကောင်းကောင်းပေးပြီး အရင်သင်ကြားပေးပါတယ်။ ဆရာမတွေက တစ်တန်းကနေ ၁၀တန်း (Sec 2) အထိသင်ပေးတော့ မျိုးဆက်တခု ၁၀နှစ်ဆို သိသိသာသာ Attitude စိတ်နေသဘောထား ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးက နာခံမှုနည်းတော့ မျိုးဆက်တစ်ဆက်နဲ့ မရရင် ဦးသိန်းစိန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အနှစ်၂၀ မျိုးဆက်၂ဆက် သင်ကြားပို့ချရမယ်။ အဲဒီ နောက်အနှစ်၂၀အချိန်ဆို မြန်မာသမ္မတအသစ်က ကျွန်တော် ဦးဝတ်မှုန် ဖြစ်နေပြီး၊ သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန် နဲ့ အင်အယ်ဒီပါတီဥက္ကဌဟောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့က သမ္မတအကြံပေး စီနီယာသမ္မတရာထူးပေါ့ .. ဟဲဟဲ…ရယ်စရာရေးတာပါ။
၀န်ထမ်းပြေး၊ ရာဇ၀တ်ကောင်များခင်ဗျား… ကျွန်တော်တို့အတွက် မကြာခင် သမ္မတထံ အသနားခံစာတင်သွင်းပေးမဲ့ ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ် ကိုဖိုးပါ ထံသို့ အကူညီတောင်းထားပါပြီ။ မကြာခင်မှာ ပညာမတောက်တခေါက်တတ်သူ ကျွန်တော်တို့ ၀န်ထမ်းပြေး၊ရာဇ၀တ်သားအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်မယ်မျှော်လင့်ပါကြောင်း။ ကိုဖိုးပါ ဆီတော့ အမည်၊နာမ၊အချိန်များကို အမှန်အတိုင်းရေးပို့ထားပါတယ်။ သို့သော် အားနာစရာရှိလို့ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အမည်၊နာမ၊အချိန်များကို ပြောင်းလဲရေးထားပါတယ်။